आज पृथ्वी र सूर्य सबैभन्दा नजिक : ११ बजेर ५४ मिनेटमा सबैभन्दा नजिक | Ratopati
आज पृथ्वी र सूर्य सबैभन्दा नजिक : ११ बजेर ५४ मिनेटमा सबैभन्दा नजिक
आज अर्थात् मंगलबार ४ जनवरीमा हाम्रो पृथ्वी यो वर्ष सूर्यको सबैभन्दा नजिक भएको छ । दिउँसो ११ बजेर ५४ मिनेटमा पृथ्वी सुुर्यको नजिकको विन्दुमा रहेको थियो । यो दुरी छोटिएर १४ करोड ७१ लाख ५ हजार ५२ किमीमा पुगेको थियो । विज्ञानमा यो सिद्धान्तलाई पेरिहिलियन अर्थात् सूर्य समिपक भनिन्छ ।
६ महिनापछि २०२२ को जुलाई ४ मा पृथ्वी यो वर्षको सबैभन्दा पर पुग्ने छ । त्यतिबेला यो दुरी १५ करोड २० लाख ९८ हजार ४ सय ५५ किलोमीटरमा हुनेछ । यो सिद्धान्तलाई एपहिलियन भनिन्छ ।
पृथ्वी र सूर्यको बीचको दुरीबाट मौसम तय हुँदैन
प्लानेटरी सोसाइटी भारतका निर्देशक एन श्री रघुनन्दन कुमारले भने, ‘मानिसलाई लाग्ने गरेको छ कि सूर्य र पृथ्वीबीचको दुरीबाट मौसम र तापमान तय हुन्छ । यो सही होइन । सूर्यलाई घुम्दा पृथ्वी आफ्नो धुरीमा करिब २३.५ डिग्रीमा रहन्छ । यस कारण मौसममा परिवर्तन हुन्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘झुकावका कारण कुनै समय पृथ्वीको जुन भागमा सूर्यको किरण सीधा पर्छ, त्यहाँ गर्मी हुन्छ र जहाँ किरण झुकेको हुन्छ त्यहाँ चिसो महसुस हुन्छ । यसका साथै वायु दबाव, मरभूमिबाट आउने हावासमेत कयौ कारणबाट तापमान प्रभावित हुन्छ ।’
उत्तरी ध्रुवमा विस्तारै विस्तारै कम हुन्छ चिसो
जनवरीमा वर्षको सुरुवातमा उत्तरी ध्रुवमा धेरै देशमा चिसोको मौसम हुन्छ र दक्षिणी धु्रवमा गर्मी हुन्छ । यो समय पृथ्वी सूर्यको सबैभन्दा नजिक हुन्छ । अब पृथ्वी र सूर्य बीचको दुरी विस्तारै विस्तारै बढ्दै जान्छ । जुलाईमा यी दुई सबैभन्दा दुरीको अवस्थामा रहन्छन् ।
जुलाईमा जब पृथ्वी सुर्यको सबैभन्दा दुरीमा रहन्छ नेपालका आसपासका देशमा पनि गर्मीको मौसम रहन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सूर्य र पृथ्वीबीचको दुरीबाट मौसम फेरिन्न ।
मंगल ग्रहमा देखियो ढोका : के अन्य ग्रहका मानिसहरू साँच्चै त्यहाँ बस्छन् ?
मृत्यु हुँदा मानिसले झैँ दुःख मनाउँछन् हात्ती, पहिलो पटक भयो यो नयाँ खुलासा
डल्फिनले पनि गर्छ आफ्नो छालाको स्याहार, यो चिज प्रयोग गर्छ
चन्द्रमाको माटोमा पहिलो पटक उमारिएको बिरुवा के भयो ?
किन बल्छ काठ , धातु किन बल्दैनन् ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण